Ninka guursaday muxuu sameeyaa markuu naag kale jeclaado | Niman qurux badan
Alicia tomero | 22/11/2021 18:10 | Lamaanaha iyo Galmada
Gaaladu way jirtaa oo ragga guursaday way ka badan tahay sida ay u muuqato. Hubaal in aad isku aragto xaaladdaas, halkeed kula kulmeysaa a nin guursaday adigana xiriir baa ka dhexeeya. Laakiin shakigu halkaas kuma eka, sababtoo ah haddii aan aad u jecelnahay ninkaas, waxaan dooneynaa inaan ogaano sida uu u dhaqmo. markuu jacayl ku dhaco.
Xaqiiqda ah in ninku is-qabqabsi la sameeyo ayaa naga dhigaysa in aan sidaas u maleyno guurkoodu maaha mid lagu qanco. Noloshaadu waa inay ahaataa mid joogto ah, aan dan lahayn, iyo xataa caajis. Inkastoo wax kasta oo aan sabab u ahayn dabeecadaada, qaar badan oo iyaga ka mid ah ayaan dhib ku qabin inay sameeyaan waxay samaynayaan.
1 Waa sidee ninka guursaday markuu naag kale jeclaado?
2 Sidee loo guursadaa nin gacalkiisa?
3 Talo ku socota nin guursaday oo jacayl qabo
Waa sidee ninka guursaday markuu naag kale jeclaado?
Nin guursaday hubaal waa inuu aad u qiimeeyaan maqaamkooda iyo xiriirkooda intaadan go'aan qaadan. Tallaabooyinka la qaadayo mararka qaarkood lagama fikiro, laakiin hubaal ma aadan diiradda saarin sida aad ku timid gaalnimo.
Waxay kaliya ka fikiri doonaan sida uu u xun yahay xiriirkooda hadda mana heli doonaan inay miisaamaan waxa uu yahay waxa laga yaaba in aad waydo. Ma cusboonaysiiyaan waxa ay ka heli karaan xiriirkooda, haddii ay weli jirto rajo ama haddii wax la hagaajin karo. Caajisnimadu waa mid ka mid ah qodobbada ay leeyihiin oo ay garan karaan oo keliya waxay haystaan markii ay dhab ahaan u waayeen.
Nin daacad ah ayaa si isku mid ah u kara naag kale jeclaada. Waa halkan marka xiis la'aanta tartiib-tartiib ah ee nolosha qoyskiisa ka bilaabato iyo in aan la noolayn ololkaas baxaya. Ninkaas guursaday wuxuu bilaabaa inuu madaxiisa meel kale yeesho, waxa uu noqdaa mid ka sii daran in aanu awoodin in uu si wada jir ah u gudan karo dhammaan waajibaadkiisa. Wuu ka fog yahay oo inta badan kiisaska wuu leeyahay madaxiisa oo ka fekeraya xiriirka kale.
Xiriirka uu la leeyahay xaaskiisa xoog bay hoos ugu dhacaysaa. Mar dambe kuma faraxsana inuu daqiiqado la wadaago iyada, xitaa ma xiisaynayo inuu dhegeysto mashaakilkeeda ama shucuurteeda. Guriga, lacagtu si joogto ah uma timaado, tan iyo markii ay baaba'day iyada oo la joogta jacaylkeeda.
Sidee loo guursadaa nin gacalkiisa?
Xiriirka guurka ee guriga waxaa saameyn kara taxadar la'aanta labada midkood. Waxaad u maleyn kartaa in ninku yahay kan mid kale eegaya, marka xaaskiisa ay bilawdo inay dayacdo nafteeda. Iyada oo ku saleysan qodobkan, xaqiiqadani way ku kala duwanaan kartaa qaar badan dhinacyada jirka iyo nafsiga, si ninku aad ugu farxo in uu guriga dibadiisa ka eego waxa aanu ka helin gudaha.
Haddii ninka guursaday uu leeyahay marwo, hubaal wuu rabi doonaa waqti badan aan la qaadan karo iyada. Waxaad naagtaas ku arkaysaa wax kasta oo aad ka jeclaan lahayd lammaanahaaga hadda. Waxaa laga yaabaa inay yihiin farxad iyo madadaalo cusub, wax horayba uga lumay gurigaaga.
Xaqiiqda ah in la ogaado in uu jacayl ku jiro waxay noqon doontaa sababtoo ah ma uusan helin jir ahaan, laakiin dhammaan tayada iyo qiyamka uu helayo. Intaa waxaa dheer, waxaad mar walba rabi doontaa inaad wax badan ka ogaato jacaylkaaga iyo wuxuu siin doonaa jacaylkaas oo dhan in uu ka maqan yahay guriga.
Mar walba wuu ka warqabaa jacaylkiisa, sida aad tahay iyo waxa aad samaynayso sababtoo ah adiga ayaa maskaxda ku haya. Wuxuu jecel yahay inuu daryeelo muuqaalkiisa oo uu is-qurxiyo marka uu la kulmo. Maxaa intaas dheer, wuu farxayaa oo werwerayaa markay isu tagaan.
Maxaa sababa neerfaha? Waxaa jiri kara sababo badan. Waxaa laga yaabaa in dareenka fudud marka aad aragto gacaliyahaaga uu ku raaxaysto, laakiin sidoo kale waxay noqon kartaa in ay tahay markii ugu horeysay ee aad sameyso iyo in mamnuuciddu ay kugu kiciso walwal.
Talo ku socota nin guursaday oo jacayl qabo
Inta uusan qaadin tallaabo kasta oo adag oo rasmi ah, ninku waa in uu fikrado cad ka haystaa sidee dareemaysaa iyo xaaladdu waa sidee. Ma sahlanaan doonto inuu go'aan gaaro haddii uusan arkin mustaqbalka fog haddii ay hubaal tahay jacayl uu dareemayo.
Bilawga dhammaan cilaaqaadka, wax walbaa had iyo jeer waa mid aad u qurux badan oo qumman. Waad noqon kartaa jacayl, laakiin waxa laga yaabaa inay noqoto mid ku meel gaar ah. Waa baaqa 'khayaali', halkeed ka heli kartaa dhammaan dareenka u dhow jacayl aan shuruud lahayn, sababtoo ah dareenka ayaa aad u xoog badan.
Ficilka jacaylka waxay socon kartaa bilo ilaa sanado oo ma jiraan wax ka fiican in la arko waqti ka dib. Waa inaad ka fikirtaa haddii aad go'aansato inaad doorato qofka kale waa inaad ku aqbashaa dhammaan cilladihiisa iyo wanaaggooda.
Dad badan baa dareenkooda iyo jacaylku ku kaxeeyaa waxaa xaqiiqo ah in aysan xakameyn karin. Waxa dhici doonta in dareenka aad qofkaas u qabtid uu noqdo mid dagdaga oo haddii aad hal mar samayso marar badan ayuu ku celin doonaa. Xidhiidhka adagi waxa uu la socdaa xuduudo badan oo u dhexeeya labada qof waa in ay aqbalaan midba midka kale marka ay wajahayaan dhammaan cilladaha oo ay ka shaqeeyaan sidii midba midka kale u caawin lahaa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Lamaanaha iyo Galmada » Ninka guursaday muxuu sameeyaa markuu naag kale jeclaado